ग्रह दशाहरु भनेको के हो ? ग्रहहरुको प्रभावहरु हुन्छ कि हुँदैन ? अस्तित्वमा जे–जे छ, त्यसको प्रभाव हुनु त स्वाभाविक हो । यदि यो सौर्यमण्डलमा ग्रहहरु छन् भने, नक्षत्रहरु छन् भने उनीहरुको प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो नजिक जो व्यक्ति बसेको छ, जस्तो प्रकारका वस्तुहरु हामीले राखेका छौं, त्यस्ता व्यक्तिहरु-वस्तुहरुको प्रभाव हामीमा पर्छ ।
२०७६ श्रावण २४ शुक्रबार ०८:४७:०० मा प्रकाशित